Ixabiso eliphezulu leLogitech G PRO X yeeNtloko zeNtambo ngeBlue VO! CE Microphone | Ndisuka mac
Ixabiso eliphezulu leLogitech G PRO X yentloko enentambo ngombhobho weBlue VO! CE
Enye yeefowuni eziphambili zeyona "gamers" inzima kakhulu yiLogitech G PRO X kwaye ngoku inesaphulelo esibalulekileyo Iwebhusayithi yeAmazon yokuthenga kwi-Intanethi. Ezi ntloko zilapha ngaphakathi elona xabiso liphantsi kwimbali yalo.
Kwixesha elidlulileyo besinako zama ezi ntloko zentloko ndivela eMac kwaye inyani kukuba sinokuqinisekisa ukuba iyintloko yentloko Umtsalane kumgangatho wesandi, nakwimigangatho yawo yokwenziwa kunye nezixhobo.
I-Logitech G PRO X yentloko, isandi esikhohlakeleyo kunye nomgangatho welizwi kubadlala umdlalo
Siyaqonda ukuba umnikelo uya kufana nazo zonke ezibonelelwa yile webhusayithi yokuthenga, okwexeshana, Ke ukuba ungomnye wabo bebefuna iifowuni ukuba bazidlale okanye ngokuthe ngqo ngomgangatho ophezulu wesandi, oku kunokuba kukuthengwa okuhle kuwe.
ILogitech G PRO X yongeza isandi esingqonge i-7.1 ukuze sikwazi ukuthi sijamelene nomgangatho omsindo okhohlakeleyo. Ukuba sigxila kwimidlalo ngokucacileyo umgangatho ocacileyo ochanekileyoenkosi ngokuyinxalenye kuyilo lwakho i-mesh ekhethekileyo. Bakwongeza itekhnoloji yemakrofoni yeBlue VO! Ye-CE enomgangatho wobuchule wokucoca ulwelo olususayo ukulungiselela ilizwi lakho ngexesha lokwenyani.
Esi sisibonelelo esibalulekileyo kwaye njengoko sisitsho ngentla asikaze sibonwe ngaphambili kwezi ntloko zintambo zivela kwiLogitech. Ungonga ngaphezulu kwama-euro angama-60 ngoku kwaye yiyo Ixabiso laso eliqhelekileyo li-euro ezingama-135 kwaye namhlanje unokuzifumana nge-euro ezingama-71,99. Kukwakho nohlobo olungenazingcingo lwale modeli yee-headphone, kodwa kule meko azithengiswa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Ixabiso eliphezulu leLogitech G PRO X yentloko enentambo ngombhobho weBlue VO! CE
I-firmware entsha ye-Apple AirTag ngoku iyafumaneka
Isizukulwana sesithathu se-AirPods sinokumiliselwa ngoSeptemba 30